သံသယရှိသော အသားပို (Polyp) ဆိုသည်မှာဘာလဲ? - intouchmedicare
သံသယရှိသော အသားပို (Polyp)ဆိုသည်မှာဘာလဲ?
Last updated: 2022-03-25 | 2019 ကြည့်ရှုခြင်း |
အသားပိုသည် အရေပြားပေါ်၌ဖြစ်သောအသားပိုတစ်ခုဖြစ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့် မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပါအများစုအားသံသယဖြစ်စေကြပါသည်။အထက်ပါပြောခဲ့သည်အတိုင်းအသားပိုသညသ် ကျန်းမာရေးအားထိခိုက်မှု့ဆိုးကျိုးများရှိ (သို့) မရှိ အားစိတ်ပူရပါသည်။ဤသည်နှာ ရောဂါဆိုး၏အချက်ပြမှု့လက္ခဏာတစ်ခုလားဟု အထူးသဖြင့်အလှအပကြိုက်တတ်သူများနှင့် အသားအရေလှပြီးချောမွေ့စေရန် ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ် တို့မှအားလုံး၌ရှိနေသော သံသယများအတွက် အသားပို (Polyp) ဆိုသည်မှာဘယ်သို့နည်း မည့်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသည်နှင့် အသားပိုအားဖြတ်ထုတ်ပုံအပါအ၀င်လွယ်ကူသောအသားပိုကြိတ်ဖြတ်ထုတ်ပုံနည်းလမ်းအားလည်းသိရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသားပို (Polyp) ဆိုသည်မှာဘာလဲ?
အသားပို (Polyp) ဆိုသည်မှာ အရေပြားပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်တတ်သောသေးငယ်သောအသားတုံးလေးများဖြစ်ပြီးအရောင်နှင့်အရွယ်အစားကွဲပြားမှု့ရှိပါသည်။အများအားဖြင့်အသက်အရွယ်ရလာသောသူများတွင်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကွေးသောနေရာများတွင် တွေ့နိုင်ပြီး မျက်နှာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက် (သို့) အရေတွန့်တတ်သောနေရာများဖြစ်သည့် ဥပမာ လည်ပင်း၊ဂျိုင်းကြား၊မျက်ခွံ့ကဲ့သို့သေးငယ်သောအရာများမှအစမျက်ရစ်ကြီးများအထိတွေ့နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကြီးလွန်းသည်ဟုခံစားရလျှင် (သို့) ပုံမှန်မဟုတ်ပဲကြီးထွားနှုန်းမြန်ပါက ရိုးရိုးအသားပိုဖြစ်ခြင်း (သို့) အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောအသားပိုဖြစ်ခြင်းအားသိရှိခွဲခြားနိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆေးရန်ဆရာ၀န်နှင့်ပြသင်ပါသည်။အကယ်၍ကြီးလွန်းသောအသားပိုဖြစ်နေပါက ဆရာ၀န်မှအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအားလျော့ချရန်အတွက် ဖြတ်ထုတ်ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစားကြီးသည်နှင့်အမျှ အ၀တ်အစား၀တ်သည့်အခါ၌ပွတ်တိုက်မှု့ရှိသောအခါနာကျင်မှု့ကိုဖြစ်စေပါသည်။
အင်ဆူလင်ဆေးမတိုးခြင်းအခြေအနေ သုတေသနစစ်ဆေးမှု့အရ အသားပိုဖြစ်စေသောအကြောင်း အရင်းနှင့်ပက်သက်၍တွေ့ရှိရသောခန္ဓာကိုယ်ထုထည်အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်မှု့ရှိနေပါသည်။ကဆီ ဓာတ် (Triglycerides) မြင့်ခြင်း၊အင်ဆူလင်ဆေးမတိုးခြင်းအခြေအနေ
၀ခြင်း အ၀လွန်သူများတွင် (Acanthosis Nigricans) အရေပြားညို၍လှိုင်းကဲ့သို့တွန့်နေသော အရေးကြောင်းထခြင်းရောဂါ အဖြစ်များကြပါသည်။ ထိုအရေပြား၌အသားပို (Polyp) လည်ပင်းနှင့် ဂျိုင်းတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
ကိုယ်၀န်ရှိခြင်းကိုယ်၀န်ဆောင်နေစဥ်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာ ပြီး (Polyp) အသားပိုဖြစ်ခြင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ (သို့) သွိုက်ရွိုက် လုပ်ဆောင်ချက် Endocrine စနစ် နှင့်ဟော်မုန်းမညီမျှခြင်းပြဿနာများကြောင့်လည်းဖြစ်နို ပါသည်။
(HPV) အေ့ပီဗီပိုး အသားစယူ၍ပြုလုပ်စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်အရ အေ့ပီဗီ (HPV) ပိုးDNAအုပ်စု၌ 50%စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသောကြောင့် (Human Papillomavirus: HPV) အေ့ပီဗီ(HPV)ပိုးရှိ လျှင် (Polyp) အသားပိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိထားတွေ့ရှိရပါသည်။
မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း မိသားစုထဲ၌ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်များတွင် (Polyp) အသားပို ပါရှိသူများရှိပါက မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် အသားပိုအားဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါသည်။
အသားပိုအားခွဲစိတ်ခြင်း ဤနည်းလမ်းသည်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် သွေးထွက်ခြင်းအားသတိပြုရန်နှင့် အမာရွတ်လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အသားပိုအားမီးတို့ခြင်း (Cauterization) ဤနည်းလမ်းသည်အရေပြားနေရာများစွာ၌ဖြစ်သော အသားပိုအားလောင်ကျွမ်းစေရန်မီးကိုအသုံးပြု၍တို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အအေးဓာတ်ဖြင့်ကုခြင်း (Cryotherapy) ဆရာ၀န်မှ အာရုံကြောအနီး၌ကိရိယာအားထည့်သွင်း ပြီးနောက် အာရုံကြောများအေးခဲစေရန်အပူရှိန်အားလျော့ချပါမည်။ဤနည်းလမ်းသည် နာကျင်မှု့နှင် ယားယံမှု့အားလျော့ချရန်ာနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လေဆာပစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ တိကျ၍ထိရောက်မှု့မြင့်မားသောအသားပိုဖယ်ရှားသောနည်းလမ်း ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထုံဆေးအား 45 မိနစ်ခန့်လိမ်ပေးခြင်းဖြင့်နာကျင်မှု့ကိုသက်သာစေ ပြီးနောက်အသားပိုအားဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အပြင်ာဒဏ်ရာအားသေးငယ်စေပါသည်။ ၄င်းသည် ဥပမာ မှဲ့၊မှဲ့ခြောက်၊တင်းတိတ်၊ကြွက်နို့ကဲ့သို့ အခြားအရေပြားရောဂါများကိုပါကုသနိုင်ပါသည်။
(Polyp) အသားပိုနှင့်ပက်သတ်၍ (သို့) မလိုလားအပ်သောအရေပြားရောဂါပြဿတာရှိသူများသည် မှဲ့ဖယ်ရှားခြင်း၊အမာရွတ်များ၊တင်းတိတ်၊ ကြွက်နို့နှင့် ခီလွယ် (Keloid) ထိုးခြင်းများအပါအ၀င် (Polyp) အသားပိုဖယ်ရှားခြင်း၀န်ဆောင်မှု့အား အိမ်အနီးရှိ Intouch Medicare ဆေးခန်းမည်သည့်ဌာနခွဲတွင်မဆို ၀န်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။ သင်နှင့်နီးသောဆေးခန်းဟု Google ရိုက်ရှာနိုင်ပြီး Website ၀က်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ရှိသောစာမျက်နှာအဆက်အသွယ်များမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင်စံနှုန်းများနှင့်အညီအထူးကုဆရာ၀န်များ ထိရောက်ကောင်းမွန်သော ရောဂါရှာဖွေ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု့နှင့် ကုသနိုင်ရန်အတွက်စက်ကိရိယာများရှိခြင်းကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာအဆင့်မီသော၀န်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။